खेलकुद Archives - itaharinews
खेलप्रेमी शम्भु वास्तोलाका स्मृतीमा एक दिवसिय फुटसल प्रातियोगिता !
सुनसरी,६ चैत्र । सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न शम्भु वास्तोला स्मृति प्रथम प्रदेस स्तरिय नकाउट फुटसल प्रतियोगताको उपाधि पाथिभरा फुटसल इटहरीले जितेको छ । इटहरी १० मा रहेको एसडी फुटसलमा सम्पन्न खेलमा पाथिभरा फुटसल इटहरीले बिग फुटसल धरानलाई चार एक गोल अन्तरले हराउदै उपाधि जितेको हो । प्रदेस नम्बर १ का विभिन्न १२ वटा फुटसल टिमको सहभागिता रहेको पहिलोे शम्भु वास्तोला स्मृति प्रदेस स्तरिय फुटसल प्रतियोग...
मच्छिन्द्र क्लब विदेशी टिममाथी हाबी हुँदै बुढासुब्बा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा !
सुनसरी,१३ फागुन । बिमल घर्ती मगरको ह्याट्रिकसँगै मच्छिन्द्र क्लब काठमाडौ बुढासुब्बा गोल्डकपको सेमिफाइनमा प्रवेश गरेको छ । बिमलले प्रतियोगितामा नै पहिलो ह्याट्रिक गर्दा मच्छिन्द्र क्लब विदेशी टिम भारतको सण्डे एफसिमाथी हाबी भएको थियो । मच्छिन्द्रले भारतको सण्डे एफसि कोलकतालाई ६–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । मच्छिन्द्रले सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौसँग बिहीबार खेल्नेछ । मच्छिन्द्रका तर्फबा...
२२ औं बुढासुब्बा टुबोर्ग गोल्ड कपमा पाहुना टोली युकेएफसीले बिजयी सरुवात गरेको छ ।
सुनसरी,१० फागुन । शनिबारबाट सुरु गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले पराजित गर्दै युकेएफसीले बिजयी सुवात गरेको हो । निध्रारित समय गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिइएको हो । पेनाल्टी सुटआउटमा युकेएफसीका लागि कप्तान वेरिन प्रधान, सिदान्त क्षेत्री, प्रशान्त राई र प्रयास प्रधानले गोल गरे । धरानका लागि कप्तान हेमन्त थापामगर र मनिस ग...
२२ औं बुढासुब्बा गोल्डकप फागुन १० गतेदेखि, विजेताले १० लाख पाउने !
धरान / २२ औ अन्र्तराष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा टुबोर्ग गोल्डकप फागुन १० गतेदेखि हुने भएको छ । आयोजक धरान फुटबल क्लबले आज नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फागुन १० गतेदेखि १७ गतेसम्म प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको हो । यसअघि मंसिर १९ गतेदेखि २८ गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी भएपनि स्थानीयतह उपनिर्वाचन र साग खेलकुदको कारण प्रतियोगिता सार्नुपरेको अध्यक्ष किसोर राईले...
एमएम कप :सुदुरपश्चिमसंग मलेसिया पराजित !
इनरुवा / सुनसरीको इनरुवामा जारि दोश्रो मनमोहन मेमोरियल एकदिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न समुह ‘डी’ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा सुदुरपश्चिम प्रदेशले मलेसिया(११ लाई पराजित गरेको छ। इनरुवा रंगशालामा सम्पन्न खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिंग गर्दै मलेसियाले दिएको ५० रनको लक्ष्य सुदुरपश्चिमले २ विकेट गुमाएर ७.२ ओभरमा पुरा गर्यो। सुदुरपश्चिमको लागि लोकेश बम र खडक बोहराले अविजित समान १५...
एमएम कप: प्रदेश नम्बर २ द्वारा कर्णाली पराजित !
सुनसरी,२४ पुष । सुनसरीको इनरुवामा जारि मनमोहन मेमोरियल एकदिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह ‘बि’ को दोश्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई प्रदेश नम्बर २ ले ८ विकेटले पराजित गरेको छ। हारपछि कर्णाली प्रदेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब शुक्रबार हुने प्रदेश नम्बर २ र नेपाल पुलिस बीचको खेलमा विजेता हुने टिमले सेमीफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। पुलिसले पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो।...
सुनसरी, एमएम कप: नेपाल पुलिस क्लबद्वारा कर्णाली प्रदेश पराजित !
सुनसरी,२३ पुष । सुनसरीको इनरुवामा जारि मनमोहन मेमोरियल एकदिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह ‘बि’ अन्तर्गत पहिलो खेलमा विभागीय टोलि नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेश बिरुद्ध २६७ रनको विशाल जित हात पारेको छ। खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले दिएको ३४७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कर्णाली प्रदेशले २७.१ ओभरमा ७९ रन बनाउदा सम्पूर्ण विकेट गुमाउन पुग्यो। कर्णाली प्रदेशको लागि राज शाहले सर्वा्धिक २३ र...
एमएम कप : त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमीफाइनलमा
सुनसरी,२२ पुष । सुनसरीको इनरुवामा जारि मनमोहन कप एकदिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी क्लब समुह ’ए’ को विजेताको रुपमा सेमीफाइनल प्रवेश गरेको छ । आर्मी प्रदेश(३ पछि सेमीफाइनल पुग्ने दोश्रो टिम बनेको छ । इनरुवा क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा एमएमसीसी इनरुवाले दिइएको ५७ रनको लक्ष्य त्रिभुवन आर्मी क्लबले विकेट नगुमाई ५ ओभरमै पुरा गर्यो । लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आर्मीका ओपनर कुशल ...
एमएम कप “ एपीएफद्वारा एमएमसीसी इनरुवा पराजित !
सुनसरी,२१ पुष । सुनसरीको इनरुवामा जारि मनमोहन मेमोरियल राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह ’ए’ को दोश्रो खेलमा विभागीय टोलि शशस्त्र प्रहरी बल ( एपीएफ ) ले स्थानीय टिम मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टर इनरुवालाई ८३ रनले पराजित गरेको छ। जितको बाबजुद पनि एपीएफको सेमीफाइनल सम्भावना कमजोर रहेको छ। मंगलबार हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई इनरुवाले पराजित गरेमा एपीएफ र आर्मी मध्ये नेट रन रेटमा ...
एमएम कपमा प्रदेश १ को बिजयी सुरुवात !
सुनसरी,१७ पुष । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा रङ्गशालामा सम्पन्न क्रिकेट खेलमा प्रदेश नम्बर ५ माथि ६८ रनको जित दर्ता गर्दै एक नम्बर प्रदेशले प्रतियोगितामा बिजयी सुरुवात गरेको हो । १ सय २१ रनको बिजयी लक्ष पछ्याएको प्रदेश नम्वर ५ ले ५२ रन मात्र जोड्न सक्यो । प्रदेश नम्बर ५ केवल १८ ओभरमा अलआउट हुन पुगेको थियो । टिमलाई जित दिलाउने क्रममा एक नम्बर प्रदेशका दिपेश कंडेल एक्लैले विपक्षी टिमको ६ विकेट चट्काए ...